Rita, Writing for My Sake!: ဂန္ထဝင် ငါးဟင်း
kom: ရီတာ တရားများထိုင်နေသလားလို့။ စနေတနဂ်နွေ တွေ ပျောက်နေလို့
RITA: သမီးကို ပြောတာလား
kom: ဟုတ်တယ်။ သမီးကိ ပြောတာ. အဖြူရောင်ဝတ်ထားတဲ့ သမီးနဲ့ လိုက်သွားတဲ့ ခွေဖြူဆီကနေကြားတာ
RITA: မကြာခင် အချိန်အတွင်းမှာ ငါးဟင်းကို ကြွားပါတော့မယ် DND
kom: ကြွားပါ ကြွားပါ။ ဘိုက်ဆာနေတာနဲ့ အတော်ဘဲ။ တို့တော့ဝက်သားလုံးကြော် မနေ့က ကြောထားတာကိုဆက်စားမှာ မစားရသေး။
RITA: တခါတည်း စားချင်စိတ် ပျောက်သွားစေရမယ်
kom: ထင်ပါတယ် သူများချက်တာလား ကိုယ်ချက်တာလားလှို
RITA: ခဏစောင့် ချစ်ချစ်ဆီ အရင် လှမ်းပို့လိုက်ဦးမယ် email နဲ့
myo: DND ကဘာလဲ
kom:ိဒေ အန် နိုက်ဖြစ်မယ်။
RITA: DND = ဒန်တန့်ဒန်
kom:ီဒီ တီ ဒီဖြစ်ရမှာ စာလုံးပေါင်းမှားနေတယ။့့်ပု့ကိုဘ သူငယ်ချင်း.
RITA: ခဏလေး မေးလ်ပို့ပါရစေ
kom: ပု့်ပါ ပို့ပါ. စိတ်ကုန်သွားအောင်
RITA: kom: ပု့်ပါ ပို့ပါ. စိတ်ကုန်သွားအောင် )
RITA: ပုံ (၁) )) နဲနဲတော့ သီးခံကြပါ။ ဖုန်းကင်မလာ မကောင်းလို့ပါ။
kom: ကလစ်ရင်ကောငးမလား မကောင်းလား
RITA: ပုံ (၂)
kom: စားပြီးမှ ဖွင်ရင် ကောင်းမာလား မစားခင်ဖွင်ရင်ကောင်းမလား။
RITA: ပုံ (၃)
RITA: ပုံ (၄) )) ဒါလေးက နဲနဲ ကပ်သွားလို့ ရေထည့်လိုက်တာ ခုနောက်ဆုံးပုံ
RITA: ခုထိ မြည်းမကြည့်ရသေးဘူး။ ဘယ်လိုနေမှန်း မသိဘူး။
RITA: အိမ်ကလူတွေလဲ ငါးဟင်းတခါမှ မချက်ဘူး။ ချက်တော့ချက်တယ် ပင်နီဆူလာက ဗမာငါး။ ဒါနဲ့ ကိုယ်ဘာသာ ရမ်းတုတ်ထားတာ။
kom:ူးဒုတ်ယပုံကလဲ အိုးကသေးသေး ငါးက ကြီးကြီး အမြင်လချင်လို့ ငရုတ်သိးတွေ အတင်းဘဲ ငါးပေါ်တင်ထားတယ်။ စူးနွယ်လေးနဲ့များကွာပါ့။
RITA: ငရုတ်သီး မပါဘူး မမ။ ခရမ်းချဉ်သီး။ အစပ်မစား။
kom: သုံးက ငါးက ဖြူဖြူကြီးအတင်းဘဲ ငရုတ်သီးတွေါတင်ပြီးဖုံးထားတယ် သူ့ငါးကြီးက ရုပ်ဆိုးတာကိုး
RITA: သမီး ကြိုးစားပမ်းစား mini chopper နဲ့ မွှေပြီး ချက်ထားတာတောင် စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းသေးသလား။
RITA: ဒါဆို ပို့မိတာ မှားပြီထင်တယ်။ ဖွင့် မကြည့်နဲ့ လို့ ပြောလိုက်ရမလား ဟင်။
Vista: ကိုယ်ထင်တာတော့ ငရုတ်သီးထဲကို ငါးအစိမ်းထည့်ထားတယ်မှတ်လို့ 
RITA: ငရုတ်သီး မဟုတ်ပါဘူးဆို အတင်း ငရုတ်သီးနေကြပြန်ပြီ
kom: အမလေး လေး နောက်ဆုံးပုံက အဆိုးဆုံးဘဲေ၇ထည့်လိုက်တော့မှဖြူဖြူကြီးထွက်လာတယ် စားချင်စိတ်ကုန်အောင် ငါလိုကောင်တောင် မစားချင်ဘူး။ ကြောက်ပါပြီးအိမ်လည်မခေါ် ဟင်းချက်မကျွေးပါနဲ ယူမဲ့ယောကျားတော့ သနားမိသေးတယ။် သွပ်သွပ်
RITA: ငါးက စတည်းက သူ့ဘာသူ ဖြူနေတာ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ။ သေတော့မယ် ရီရလို့။ မချက်ခင် ကြော်လိုက်ဖို့လဲ သတိမရဘူး။ အကြာကြီးချက်တဲ့ထိ ဖြူနေတုန်း။
kom: အာရာ ဆီနဲ့လှမ့်လိုက်ရင်နီသွားမယ်ထင်တာဘဲ ကျက်မှ ကျက်ရဲ့လားမသိ. ။
RITA: အာရာဆီ ဆိုတာ ဘာလဲ။ သံလွင်ဆီတော့ ရှိတယ်။ ခရုဆီလဲ ဝယ်ထားတယ် ဖောက်တောင် မဖောက်ရသေးဘူး။ ဒီတသက် ဖောက်မှ ဖောက်ဖြစ်ပါ့မလား။
kom: မချက်ခင်ကြော်စရာမလိုပါဘူး အိုးထဲမှကျက်ရ် မနီသွားဘူးလား။ အာရာ......................... ဆိုတာ စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ပြောတဲ့ အာမေနိုက် ထုံ ရီတာ။
RITA: အော် အော် သဘောက်ပေါက်ပြီ။
Vista: ငါးအစိမ်းကို ဆားဆနွင်းမနယ်ထားဘူးလား။
RITA: ဆနွင်းမနယ်ပါဘူး နံကုန်မှာပေါ့။ ဆနွင်းကို ဆီသတ်တဲ့ထဲပဲ ထည့်တယ်။
kom: တို့က ခေါက်ဆြဲကြောစ်ားမလို့ ခရုဆီ ဝယ်မလို့ ခရုဆိ ဆိုတာ တစ်သက်လုံးမယဝ်ဘူးလို့ ဘာမှ န်းမသိလို့မြိုးကို မေးတော့မလို့တော်ဘဲ ဘယ်မှာ ဘယိလို ဘယ်နာမည်နဲ့ဝယ်ရမလဲ။
RITA: မမနဲ့ ကိုယ်နဲ့ တူတူပဲ။ ဟိုနေ့က ntuc ကနေ ဉာဏ်ထွန်းကို ဖုန်းဆက်လှမ်းမေးရတယ်။ ခရုဆီက ဘယ်နှမျိုးတောင် ရှိတာလဲလို့ ဒီမှာ ခရုဆီလိုလိုဟာတွေ ငါ အများကြီး တွေ့နေတယ်လို့။ ဆရာက ကိုယ့် အထင်ကြီးပြီး brand တွေ အမျိုးမျိုးလို့ ပြောတယ် ထင်နေသေးတယ်။ (ဘယ်သူ့မှ ပြန်မပြောနဲ့လို့ ပိတ်ထားတာ။ ခုလို လူစုံတုန်း ကိုယ့်ဘာသာ ပြောချင်လို့)
kom: အရင်ဘလော့တုံးက ဟင်းချက်သေးတယ် မှတ်မီသေးလာ ပုစွန်ကြာ် လေ. ရီတာ မှတ်မိလား. တို့ထင်တာဘဲ ပုဏွန်ကြောမဟုတ်လား.
RITA: တကယ်တော့ oyster လို့တော့ သိပါတယ်။ အနီးမှာ abalone တွေ့တော့ အဲဒါကလဲ ခပ်ဆင်ဆင်ဆိုတော့ ရောသွားတာ
kom: Oyster sauce ကျေးဇူး ဗစ် တစ်ကယ် ဝယ်မလို့ ဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိတာနြ့ပြန်လာတာ။
RITA: တော်သေးတယ် မမ snail sauce လို့ မပြောခဲ့တာ။
Vista: snail sauce
kom: snail ဆိုတာဘာမှန်းမှ မသိတာ စိတ်ချ မပြောပါဘူး။
mon: မမ အရွက်ကြော်ရင် ခရုဆီနဲ့ ငံပြာရည်လေးနဲနဲထဲ့ကြော်လေ စားလို့အရမ်းကောင်းတယ်
RITA: အမယ် ဆရာကြီး မလုပ်ပါနဲ့ သိတယ်
kom: ခေါက်ဆွဲကြော်စားမယ် ခရုဆီယဝ်ပြီးရင်. မြိုး. အရင်ကြော်ပြီးဖဘ မှာပြပါ. လိုက်ကြော်ကြည့်မယ။်
mon: ခေါက်ဆွဲကြော်ထဲတော့ ထဲ့တာမကြားဖူုးဘူးမမ
kom: ဟမ်. မထည့်ဘူးလာဒ
mon: အရွက်ကြော်မှာပဲထဲ့တာလေမမမ။ ချက်တတ်တဲ့လူမေးကြည့်ပါအုံး
kom: မမ တွေများနေပြီ မွန်.
RITA: ငါးဟင်းကို ဖွင့်မကြည့်နဲ့။ ကြည့်ရင်လဲ စားပြီးမှ ကြည့်လို့ နောက်က စာထပ်ပို့လိုက်တယ်။ ရေချိုးလိုက်ဦးမယ်။
kom: ဘယ်မှီတော့မလဲ ရီတာရယ်။
RITA: kom: ဟုတ်တယ်။ သမီးကိ ပြောတာ. အဖြူရောင်ဝတ်ထားတဲ့ သမီးနဲ့ လိုက်သွားတဲ့ ခွေဖြူဆီကနေကြားတာ )) ဟမ် ဒါကို ခုနက မမြင်ဘူး။ သတင်းက မြန်လှချည်လား။ နောက်ကနေ လိုက်ချောင်းနေသလိုပဲ။ အဖြူရောင်ဝတ်တာပါ သိသွားပြန်ပြီ။
kom: သိတယ်လေ သိတယ် မြိုးလဲသတယ် စင်စက်လဲသိတယ် ပေါက်လဲသိတယ်။ ကိုဘလဲသိတယ်။
myo: သိတယ်လေ လူတိုင်းသိတဲ့ကိစ္စ
RITA: တမင် ဘယ်သူမှ မသိအောင် ဖုံးထားတာ။ တော်ကြာ ပွဲတွေ ဆက်နေမှာ စိုးလို့
s: အမလေး.. အမေရေ.. ဘြာီ့းလဲ http://1.bp.blogspot.com/_lEJ07R3uIL0/TD3ES0uKjlI/AAAAAAAAB7A/jmkl7eaaZlo/s1600/140720101656.jpg
RITA: << မမစင် (လက်တွဲသင်ပြမယ် မရှိဘူး)
kom: နောက်ဆုံးပုံကလေးကိုဖွင့်လိုက်ပါဦးစင်စင် ..စိတ်ပျက်လက်ပျက်ပြောသည်။
RITA: သူ့ဘာသာ ငါးက အသားဖြူနေတာ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ။ ကျက်ရင် ပြီးတာပဲ မဟုတ်ဘူးလား။
s: အောင်မလေ.. သင်တာတောင် လက်တွဲသင်ရမတဲ့ တော်ေ၇း..
kom: ဘယ်နယ်လုပ်ကြမတုံ.း.သူက ခူးပြီါ်ခပ်ပြီးသားလိုချင်တာတဲ့ ။
RITA: ဟုတ်တယ် ဟိုတယောက်က ဟိုဟာလုပ်လိုက် ဒီတယောက်က ဒီဟာလုပ်လိုက်ပဲ လုပ်ချင်တာ။
s:2ပုံကြည့်ပြီးပြီ မမရေ
myo: နောက်ဆုံးပုံကို အသက်အောင့်နှိပ်လိုက်
kom: စိုင်းထီးဆိုင်ကိုကြည့်ချင်ရင် မျက်စိမှေးကြည့်ရသလို သှူုငါးက လည်းမျှက်စိမှီတ်ပြီးစားမှသာလျှင် စားနိုင်မဲ့အခြေအနေမှာရှီတယ။် ဒါတောင်မြည်းမက်ြည့ရသေးဘူးဆိုဘဲ . အရမ်းစိတ်ညစ်နေသူ
s: မမ..အဲ့ထက်ပိုရီလို့ ရတဲ့ အရုပ် မရှ်ိတော့ဘူးလား.. နောက်ဆုံးပုံ ခုပဲ ကြည့်ပြီးပြီ
RITA: I remembered one of my friend's first Pork Curry. One side is white, another side is reddish brown. You don't need to ask other's opinion, you yourself can taste that curry. How is the taste ? )) သူငယ်ချင်းတွေကိုပါ Bcc နဲ့ ပို့လိုက်လို့။ ဉာဏ်ထွန်းဆီက ပြန်စာ။ အားပေးကြတယ်
s: မလုလုတို့ နောင်သူတို့ တောင် ဒီလို ချက်တတ်တာ မဟုတ်ဘူး.. နှစ်ရောင်ခြယ်ငါး
RITA: ငါ ခုထိ မမြည်းကြည့်ရသေးဘူး။ မမြည်းရဲသေးလို့။ )) သူ့ကို ကိုယ်က ပြန်တဲ့စာ။ hee hee
s: သူတို့ ချက်ရင် အနီတစ်ရောင်ထဲရယ် .. ခုက အဖြူရော အနီရော
RITA: အာာာာ တရောင်တည်းပါ အဖြူတခုတည်း ကျန်တာက ခရမ်းချဉ်သီး အုပ်ထားတာ။
kom: စားသောက်ဆိုင်ထဲသို့လူတစ်ယောက်ဝင်လာသည်။ ကြက်ဥတစ်လုံးကို တခြမ်းက ကျက် တစ်ချမ်းက တူး. တစ်ဘက်ကကျက်တစ်ကျက်ကြော်ပေးပါဗျာ. ဟမ်. ဘာဖြစိလို့လဲ .................အိမ်က မိန်းမကို သတိရလို့ပါ ခရီးထွက်လာတာနဲနဲကြာလာပြီဆိုတော့...........
RITA: be confident. This is your first anyway. So don't expect much, and you'll be ok. )) စာ ပြန်လာပြန်တယ် ဉာဏ်ထွန်းဆီကပဲ။ ဒါမှ တို့သူငယ်ချင်း
s: သူ့ငါးကြီး ဖြူနေတာ ဖုံးချင်လို့ကြက်သွန်ဆီသတ်တွေနဲ့ ဖုံးထားတာကို ရီချင်တာ
RITA: ဘယ်ကလာ ဖုန်းရမှာတုန်း။ ငါးဖြူတာ ပုံမှန်လို့ ထင်နေတာ အပေါ်မှာ တင်ထားတာက အဲဒီက အရသာလေးတွေ ဝင်လာအောင်လို့
kom: you'll be ok. တဲ့ သူတို့ကေ မှာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး နင့်ငါး နင်ဘဲစား ငါတို့မစားဘူးဆိုတဲ့သဘော.
s: ဒါ အချစ်ဥင်္ီးလေးလား... ဖြစ်တတ်ပါတယ်လေ... ကျိတ်မှိတ်မြိဲုချကြည့်လိုက်ပါ။
kom: တို့တော့ မမြိုနိုင်ပါဘူး. ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ရီတာဘဲ စား. အိုကေမှာပါ. (ပုံ ထပ်အားပေးနေသူ) remember rita ::::::::::::::::>> you'll be ok you'll be okyou'll be ok not we
myo: စားကောင်းမယ့်ပုံပါ ငါးကို ဆနွင်းမနယ်ဘူးလား ရီတာ။ ဆား ဆနွင်းအရင်နယ်ထားလိုက်ရင် အရောင်တမျိုးဖြစ်သွားမယ်ထင်တယ်။ (မျိုးတစ်ယောက်ပဲ အားပေးဖော်ရတယ်)
RITA: ဆနွင်းက အစိမ်းနယ်ရင် နံမှာပေါ့လို့
myo: မနံအောင် နယ်ရတာလေ
RITA: myo: မနံအောင် နယ်ရတာလေ )) ဆနွင်းနံ့ကြီးက နံမယ် မဟုတ်ဘူးလားလို့
s: စပါးလုံးတစ်ထောက်အလှကို မကြည့်ပါနဲ့.. အရသာ က လျှာလည်ရင်လည်နေမှာပါ.. (လျှာက ဘယ်လိုခံစားရမှန်းမသိလို့ ညက်စိလည်သွားတာ) ရီတာ့ပုံတွေ ဝင်းဒိုးတစ်ခုစီနဲက အကုန်ဖွင့်ထားတယ်...
myo: ဒါဆို ညှီလည်းညှီမယ်ထင်တယ်
kom: ဖြစ်နိုင်တယ် မကြားဘူးဘူးငါးကို ဘာနဲ့မှ မနယ်ဘဲ ချက်ရမယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ လက်တွဲ မခေါ်ထားကြဘူးနဲ့တူတယ်။
RITA: နယ်တယ်လေ ဆား ငံပြာရည် ချိုမှုန့်
myo: ဆနွင်း သာနံကြေးဆို ဘယ်သူက ဆနွင်းထည့်ချက်နေတော့မလဲ ရီတာထုံရဲ့
RITA: ထည့်တယ်လေ ဆနွင်းကို ဆီသတ်ရင်
s: Rita ... u willbOK..
mon: ကြည့်စမ်းပါအုံးရီတာ့ကို ပြောနေလိုက်ကြတာ ကိုယ်လဲ မစားနိုင်ပါဘူး ငါးဟင်းဖြူဖြူကြီး
s: ပုံဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့ ချစ်ချစ်က အိမ်တွင့်မှုနဲ့ အချက်အပြုတ်သင်တန်းသွားတက်မယ်တဲ့
kom: ဂျင်းလေးပါ ထည့်လိုက်ရင်မကောင်းဘူးလားမျိုး ဆနွင်းဆိုတာ အသားမှာနယ့်ရတာ ငါတောင်သိသေးတယ်။
RITA: သားငါး အစိမ်းကို တခါမှ မနယ်ဘူး။ ချင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူနီက အနှစ်လုပ်တဲ့ထဲ ပါပြီးသား။
myo: ပုစွန်တို့ ငါးတို့ ညှီနံ့ပြင်းတာတွေကို ဆား ဆနွင်းအရင်နယ်ထားတာ
RITA: တခါမှ အသားကို ဆနွင်းမနယ်။ ဆီပူလာရင် ဆနွင်းမှုန့်ဗူး ဖွင့်ထည့်လိုက်တယ် ဒါပဲ။
kom: ဘုးလိုက်မှောက်ကျသွားမှခက်မယ်။ (ပုံ မဆလာဘူးမှောက်အိုးထဲမှောက်ကျဖူးသူ) ရီတာ အရင် ကပုဖွန်ကြော်ထားတာချပြလိုက်စမ်းပါ. ဒီလောက်မဆိုးပါဘူ အခုဘာလို့လက်၇ည်ေတွေ ကျသွားတာလဲ
RITA: ပုစွန်ရယ် ငါးရယ် သမီးက မကြိုက်။ ခြေလေးချောင်းပဲ ကြိုက်တာ။ အဲဒါကြောင့် နှစ်ချီကြာမှ စင်ကာပူမှာ ငါးဟင်းစားဖို့ ကြံတာ။
s: မဆလာ အိုးထဲ မှောက်ကျ
kom: ဟာ မဆလာတွေအိုးထဲ့ ကနေ ပြန်ဆယ်ရတာ မလွယ်ဘူး။ များကြီး
RITA: ဒါကြောင့် ကိုမဆလာလို့အမည်တွင်သွားတာလား
Boyz: ရီတာကိုများ ဝိုင်းပြောလိုက်ကြတာ... ဘာမှ မကျန်တော့ဘူး။ စကားမစပ် ငါးက ဘာလို့ ဖြူနေရတာတုန်း...
myo: ဒါပေမယ့် ဒီက ရောင်းတဲ့ငါးတွေတော့ ဖြူဖြူကြီးတွေပါ။ ဆိုင်က ငါးဟင်းတွေကိုပြောတာ
kom: တို့လဲသိချင်နေတာဘဲ မဖြူအောင်ဘယ်လိုချက်ရမလဲလို့။
RITA: မသိဘူး ငါးကို မကျွမ်းကျင်။ ဒီမှာလည်း ငါးတခါမှ မစား။ ဖြူတာ ပုံမှန်လို့ပဲ ထင်နေတယ်။
Boyz: ခက်တာမှတ်လို့ ... တူးအောင် ကြော်လိုက်ရင် မည်းသွားမှာပဲ
myo: ဒီကပဲငံပြာရည်အနောက်တွေလောင်းထည့်လိုက်ပါလား မမ တော်တော်မည်းတယ် ဒီကရောင်းတာတွေ
RITA: အိမ်က ညီမလေး တစ်ယောက်ရဲ့ အမေကဆို သူ့သမီးတွေ ဘာမှ မလုပ်ခိုင်းဘူးတဲ့။ လုပ်တတ်ရင် ယောက်ျားတွေကို လုပ်ကျွေးနေရမယ်။ မလုပ်တတ်ရင် အိမ်ဖော်ခေါ်လို့ ပြောတယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ သူ ဒီမှာ ချက်တော့ အဟုတ်ပဲ။ ကိုယ်ကျတော့ လှည့်ကို မကြည့်တာ အိမ်မှာတုန်းက။ ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်သလိုပဲ။
kom: တို့ကလည်းသောက်ရေတောင်သူများက ခပ်ပေးတာ။
RITA: အိမ်မှာ ကော်ဖီတောင် ဖျော်မသောက်။ ဒါပေမဲ့ ရီးစားကိုတော့ ချက်ကျွေးမှာပါ။
kom: ရီတာချက်ပေမဲ့ ဟိုက ထွက်ပြေးမှာပါ။ n2 လဲ အဲသလိုဘဲပြောနေတာဘဲသွပ် သွပ်။
RITA: ထွက်ပြေးရင်တော့ ချက်မကျွေးတော့ဘူးပေါ့
s: မောင်ကြီးပြန်လာလာချင်း ပြလိုက်ပြီ....
kom: ဘာပြောလဲ စိတ်ပုတ်ချက် ဝင်းဒိးုးတွေ သေချာဖွင့်ထားတာ ဒါကြောင့်ကိုး
s: ဟီးဟီး ....ဟင်းအနှစ်ထဲမှာ ငါးအစိမ်းရောထားတာလားတဲ့... ( သူတကယ်မသိလို့မေးတာ )
s: စွယ်တော်ရိပ်ပွဲတုံးက ပြဖူးတဲ့ ကလေးမ ချက်တာလို့ ဖွလိုက်တယ်.....သြော်.... တဲ့
kom: စွယ်တော်ရိပ်ပ။ ၊?
s: သင်္ကြန်ပဒေသာကပွဲတုံးက တွေ့ဖူးလိုက်တယ် ... ဖဘ မှာ သမီး လက်မှတ်ပုံတွေတောင် တင်သေးတယ်လေ
myo: နာလည်းတွေ့လိုက်တယ် အဲ့နေ့က စင်စင့်ကိုတော့ မတွေ့မိဘူး။ အောက်ကအဖြူပေါ်မှာ အပေါ်က အဝါထပ်ဝတ်ထားတယ်။
RITA: ဟုတ်တယ် မျိုး။ အဲဒါ အိမ်ကလူတွေ ဝယ်ပေးတဲ့ အင်္ကျီ။
s: ဟုတ်တယ်... နောက်ဆုံးတင်တဲ့ပုံထဲကအင်းကျီနဲ့ တော်တော်တူတယ်။ အဆင်နဲ့ အရောင်ကြိုက်လို့ တစ်ဒါဇင် ယယ်ထားတာနေမှာပါလေ
RITA: ဟုတ်ပါဘူး အဲဒီ တထည်ပါပဲ။ ဘောင်းဘီပဲ ပြောင်းသွားတာ။
myo: ဟုတ်တယ် ခုပဲသွားကြည့်လိုက်တယ် ဟိုနေ့က ဂျင်းဘောင်းဘီရှည်
Posted by Rita at 7/15/2010 01:07:00 PM
Labels: experience, joke, Singapore, This and That
ငါး ၃ ခါ တောင် ချက်တာလား..
ဒါနဲ့ဒူးရင်းသီးအပေါ်ဆုံးဆိုတဲ့ နေရာက ဘယ်နေရာလဲ.. မသိဘူး..
ဟားဟား။ တော်ပါသေးတယ်။ အကြေးခွံတွေ ဆူးတောင်တွေတော့ မပါဘူး။ :D
မူပိုင်ခွင့်လည်း မတောင်းဘူး...ဟင်းဟင်း... .
အယ်.. အမည်မသိနဲ့ ရေးလို့ ရဝူးပေါ့....
I haveaplan to visit in S on next year.
I never inform to you, coz if I inform , then u invite to me to ur house..... Oh!!!!!!! No
ဟားဟား မစိုးရိမ်နဲ့ အစ်မ။
ဧည့်သည်ဆို အမြဲ ဆိုင်မှာ ကျွေးတာ။ ချက်ရမှာ ရှုပ်လို့ရယ်၊ ပြန်သွားရင် ပန်းကန်တွေ ဆေးရမှာ စိုးလို့ရယ်။
မဆလာဘူး အိုးထဲ မှောက်ကျ တာကို သဘောအကျဆုံးပဲ။
ပုံတွေလဲ ကြည့်သွားပါတယ်။ကံကောင်းတာက ထမင်းစား
ဟင်း..........ဘာပြောရ့မှန်းတောင်မသိတော့ဘူး.eတောင်ကျယ်ကျယ်မပေါက်ဝံ့တော့ဘူး။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်က အမျိုးအမည်သိပ်သေချာမသိတဲ့ ntuc က ပင်လယ်ငါးတစ်ခါ ကြော်စားမိပြီး အလာဂျီဖြစ်သွားကတည်းက ငါးကိုမစားဖြစ်တော့ဘူး။ တကယ်တော့ ငါးကို အရမ်းကြိုက်တယ် (ကြီးမှကြိုက်တာပါ) မြန်မာပြည်က စားနေကျ ရေချိုငါးတွေကိုပဲ စားချင်တာ။
သေချာပြန်တွေးကြည့်မှ ကိုယ် ငါးဟင်းတောင် သိပ်မချက်ဖူးဘူးလားလို့။ :D
ရီတာတင်အားမရလို့ ဒီမှာ လာထုတ်လိုက်တယ် :D
ရီတာရဲ့ ရေခန်းပြီး ဆီပြန်တဲ့အထိတည်လိုက် ငါးကိုလည်း ၃မိနစ်တခါ လှန်လှန်ပေး
ပြီးတော့ ခရမ်းချဉ်သီးအုပ်တဲ့ ခွိ ကြားဖူးပါဘူး... See More
ဆီထည့်ပြီး ပူလာရင် ဆနွင်းတို့ ငရုတ်သီးမှုန့်တို့ သက်သက်ထည့်ရင်ချက်ချင်းတူးတတ်လို့
မွှေကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူနီဂျင်းထဲမှာ ဆနွင်းမှုန့်နဲ့ ငရုတ်သီးအစိမ်းမှုန့်ရောမွှေ၊ ပြီးမှ ဆီပူလာရင် အနံ့မွှေးတဲ့ထိကြော်
ပြီးရင် ရေဓါတ်ခန်းရင် ငံပြာရည်လေး ဇွန်းကြီးတဇွန်းလောက်ထည့်
အနံ့မွှေးပြီး အဲဒီမှာ အရောင်ပေါ်လာမှာ
သူကရေထွက်တယ် ပြီးရင် ခရမ်းချဉ်သီးရဲ့ရေဓါတ်ခန်းတဲ့အထိတည်
အနီကြိုက်ရင် နီလာတာနဲ့ရေနည်းနည်းထည့် ငါးထည့်
နီညိုရောင်ကြိုက်ရင် နည်းနည်းကြာကြာထား တမိနစ်လောက်ပါပဲ
ဆီပြန်တဲ့ထိ လှန်လှန်ပေးပြီး ချက်
အရည်နဲ့စားချင်ရင် ဆီတခါပြန် ငါးထဲအရောင်ဝင်ပြီးမှ နောက်ဆုံးချခါနီး
ရေနွေးပူလေးထည့် ဒါဆိုငါးထဲလည်း အရသာဝင်နေပြီးသားဖြစ်ရော။
ခေါက်ဆွဲကြော်ရင် ခရုဆီထည့်ကြော်ရင် သိပ်စားလို့ကောင်းတာလို့။
အရမ်းရယ်ရတယ်၊ စားကောင်းရင်ကောင်းမာပါ၊ ရီတာ -နာ့ကိုကျွေးကြည့် နောက်ဆို (အတူတူချင်းမို့ အားပေးတာ)
ပထမဆုံးပုံကြည့်ပြီး အားးး တောင် အော်မိသွားတယ်.....ဖြူဖြူကြီး...ဖြူဖြူကြီး... :D
၂တုံးထဲချက်လို့ တဖဲ့ပဲမြည်းလိုက်ပါတယ် ။
မယုံမရှိ၊ ယုံမရှိ.... ဟိ
ပန်းနီနီပေးနဲ့ကွယ်.... ပန်ချင်ပါဘူး။ ... ငါးဖြူဖြူ ကျွေးနဲ့ကွယ်.... စားချင်ပါဘူး။
“ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ရေဆေးငါးကြီးသဖွယ်” ဆိုတာ ရီတာ့ရဲ့ ငါးဟင်းဓါတ်ပုံကို မြင်ဖူးသူတွေ ပြောတာပဲ ဖြစ်ရမယ်။း-)
အမဲသားမရှိလို့ ရှိတဲ့ ဝက်သားနဲ့ ချက်တာများ လိုက်မမီဘူးလို့ ပြောသွားသေးတယ်။ ကိုယ်တို့ကတော့ ဘာမှ မရှိရင် ကြက်ဥခေါက်ထည့်ပြီးတောင် ချက်တတ်သေးတယ်။ မှတ်ထား။
ဖြစ်နိုင်ရင် ကြက်ဥပဲကြော်ပါ ငါးဟင်းမချက်ပါနဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကလဲ အားပေးကြတယ်
သူ့“မောင်” တော့ သနားပါတယ်
ကိုယ့် “မောင်” လို ကံမကောင်းနိုင်ရှာတော့ဘူး
အမယ် အရသာတော့ လာမြည်းမကြည့်ကြဘဲနဲ့ ပြောနေကြတယ်။ ငါးက ရေထည့်ထားတုန်း ဖြူနေတာ။ နောက်တခေါက် ရေခန်းအောင် ထပ်တည်လိုက်တာ အရောင်ပြောင်းသွားတယ် သိရဲ့လား။
ပြီးတော့ အနှစ်က အရမ်းစားလို့ကောင်းတယ်။
သော်တာဆွေရဲ့ပုဂံသူရဲကောင်းများ စာအုပ်ရှိ၇င် ဖတ်ချင်လို့ ပါ မျှဝေလို့၇မလား